မင်းရဲ့ Blog Website ကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ - With6Easy Steps - Learn Expert Blogging
မင်းရဲ့ Blog Website ကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ
ဘလော့ဂါများသည်အခြေခံအားဖြင့်သတင်းအချက်အလတ်တစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ အမှားအမှန်ကို၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ရှုထောင့်ဖြင့်ရေးသားကြသည်. ဥပမာအားဖြင့်, အသစ်ထွက်ရှိလာသော apple phone တွင်အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များရှိသည်.
ဖုန်းစွမ်းဆောင်ရည်အကြောင်းငါတို့ရေးနိုင်တဲ့ဘလော့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်, အင်္ဂါရပ်များ, အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် blog post တွင်ဆွေးနွေးပါ. ၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်သုံးစွဲသူများအား၎င်းတို့အားယုံကြည်ရန်နှင့်အပြန်အလှန်အားဖြင့်ကူညီပေးသည်, စာဖတ်သူများသည်၎င်းတို့၏အမြင်များကိုစာရေးဆရာများနှင့်စာဖတ်သူများအကြားဆက်သွယ်မှုကိုလွယ်ကူစေသည့်မှတ်ချက်များကိုရေးသည်.
သင်မြင်သည့်အတိုင်း, သင်ဖတ်နေသောဆောင်းပါးသည်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဘလော့ဂ်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်စာဖတ်သူများအားအဖိုးတန်သောအကျိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်များပေးအပ်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website ရှိဆောင်းပါးအားလုံး. အွန်လိုင်းပေါ်မှငွေရှာနည်းများကိုဝေမျှခြင်းဖြင့်ရပ်ရွာကိုကူညီနေကြသည်. ဒါကသူတို့ကိုစိတ်ပျက်စရာတစ်ခုခုကနေကာကွယ်ပေးတယ်.
ပြောဖို့မရှက်ဘူး, ငါ့ဘလော့ဂ်ခရီးရဲ့အစမှာ, ငါအမှားတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်. ထိုအချိန်မှာ, ငါလုံးဝအသစ်ဖြစ်ခဲ့သည်. ငါ့ကိုယ်ငါမရှုံးဘူး, ဘလော့ဂ်ခရီး၌အတွေ့အကြုံခုနစ်နှစ်ကျော်နှင့်, အမှားတွေကိုထပ်ခါထပ်ခါမလုပ်မိဖို့သင့်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လမ်းညွှန်ပေးနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်. တစ်ခုတည်းသောအရာသည်သင်ဤဆောင်းပါးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖတ်ရန်ဖြစ်သည်.
6 သင်၏ Blog Website ကိုဖန်တီးရန်လွယ်ကူသောအဆင့်များ
အဆင့် 1: သင်၏ဘလော့ဂ်အမည်ကိုရွေးပါ
အဆင့် 2: ဘလော့ဂ်ကိုအွန်လိုင်းတွင်ရယူပါ
အဆင့် 3: Blog Customization: ဆက်တင်များ
အဆင့်:4ပထမဆုံး Blog Post ကိုရေးပါ
အဆင့် 5: ဘလော့ဆောင်းပါးများမြှင့်တင်ရေး
အဆင့်6: Blog ငွေရှာခြင်း: ငွေရှာပါ
ထိပ်ဆုံးမှာရှိတယ်6သင့်ဘလော့ဂ်မစခင်လိုက်နာရမည့်အချက်များ.
မီးလေး ဘလော့အမည်: ပထမဦးဆုံး, ဘလော့ဂ်နာမည်ရွေးရမယ်.
Domain နှင့် Hosting ကို ၀ ယ်ပါ: မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုအွန်လိုင်းမှာရအောင်လုပ်ပါ.
သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း: ဘလော့ Customization.
သင်၏ Blog Post ကိုရေးသားခြင်း: ပျော်စရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကိုရေးဖို့အရမ်းကောင်းပါတယ်
ဘလော့မြှင့်တင်ရေး: ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်မျှဝေသည်, Twitter စသည်တို့.
Blogging မှတဆင့်ငွေရှာပါ: တွဲဖက်, ဆုံးမခြင်း.
ဤအရာသည်သင်၏အိမ်လိပ်စာနှင့်ညီမျှသောအမည်ဖြစ်သည်. စာဖတ်သူသည် web browser တွင်နာမည်ရိုက်ပါ, ဒါက blog website တစ်ခုဖွင့်လိမ့်မယ်. သက်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်နှင့်ဘလော့ဂ်အမည်တစ်ခုရှိရန်ကျွန်ုပ်သင့်အားအကြံပြုပါသည်.
ငါအစောပိုင်းကသင်တို့ကိုပြောခဲ့သကဲ့သို့, ၎င်းသည်သင်၏ဆိုင်နာမည်နှင့်ဆင်တူသည်. သင့်ဘလော့ဂ်နာမည်ရွေးချယ်ခြင်းနောက်ကွယ်မှသတ်မှတ်ချက်အချို့ရှိပါသည်. ဒါကတော့ .com နဲ့အမြဲသွားသင့်တဲ့အကြံပြုချက်တစ်ခုပါ. .com ကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်ယေဘုယျအားဖြင့်ယုံကြည်ရသည့်အကြောင်းရင်း. ၎င်းကိုအခြေခံအားဖြင့်စီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက်အတွက်သုံးသည်.
ဒီအပြင်, မင်းဘ ၀ မှာလက်တွေ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဘလော့တစ်ခုရေးသင့်တယ်. မင်းမှာအကြောင်းအရာအများကြီးရှိသင့်တယ်လို့ငါကိုယ်တိုင်ခံစားရတယ်.
မင်းရဲ့စာကိုရေးနိုင်တယ် 100 ရန် 200 blog post သည်အလွန်လွယ်ကူသည်. သွားရမည်, သင်သတိမပြုမိသောအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရေးလျှင်ဤအရာသည်စာရေးပြီးနောက်သေချာပေါက်အဆုံးသတ်လိမ့်မည် 50 ရန် 60 ဆောင်းပါးများ.
ဥပမာ, ကျွန်ုပ်သည်မကြာသေးမီကရူပဗေဒအကြောင်းကောင်းကောင်းသိသောကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းကိုကူညီခဲ့ပါသည်. သူကသူတို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုတလလောက်အရင်ပြန်ဖွင့်ပြီးအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေကိုရေးဖို့စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်. မင်းမှာနက်နဲတဲ့ဗဟုသုတရှိသလိုရူပဗေဒအကြောင်းရေးဖို့သူ့ကိုငါထောက်ခံချက်ပေးတယ်.
ငါတို့ကကြီးမြတ်တဲ့ဆွေးနွေးမှုရှိခဲ့ပါတယ်, အလားတူပင်, မင်းရဲ့ဘ ၀ အတွေ့အကြုံအကြောင်းဘလော့ဂ်ရေးသင့်တယ်၊ ဝါသနာပါတာနဲ့သွားရင်အမြဲကောင်းတယ်, ဝါသနာ (သို့) အလုပ်အကိုင်.
ဒုတိယအဆင့်ကတော့မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုအွန်လိုင်းမှာရအောင်လုပ်ဖို့ဘဲ. သင်သည် hosting package ဖြင့်မှန်ကန်စွာမှတ်ပုံတင်လျှင်၎င်းကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်.
အခြားအဆင့်တစ်ခုမှာသင်၏ဘလော့ဂ်ကိုအွန်လိုင်းတွင်ရရှိနိုင်စေရန်ဖြစ်သည်. ဆိုလိုသည်မှာတစ်စုံတစ်ယောက်သည်သင်၏ဘလော့ဂ်အကြောင်းအရာကို browser ၌သင်၏ဘလော့ဂ်နာမည်ရိုက်ထည့်လျှင်ဆိုလိုသည်. သင်၏ဘလော့ဂ်ပေါ်လာရမည်. ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်သင် hosting ၀ ယ်ရန်လိုအပ်သည်. ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာမင်းရဲ့ hosting ကုန်ကျစရိတ်ကိုသိသိသာသာလျော့ကျစေမယ့်ကောင်းမွန်တဲ့ကမ်းလှမ်းချက်အချို့ကိုလုပ်နေပါတယ်.
ငါ domain name ကုန်ကျစရိတ်အပြင် hosting ကုန်ကျစရိတ်ကိုသီးခြားမပေးသင့်ဘူးလို့ငါအကြံပေးခဲ့တယ်. ဒါကဘလော့ဂ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုမြင့်တက်စေလိမ့်မယ်.
ဒီအစား, Bluehost ကဲ့သို့အချို့သော hosting ကုမ္ပဏီများသည်အခမဲ့ domain dot.com အမည်ဖြင့် hosting ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်သင့်အားကူညီသည်. အခြား ၀ က်ဘ်ဆိုက် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင့်ဘလော့ဂ်ကိုကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်တည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြုသည်. သူတို့ကိုငါတို့ဇယားမှာဖော်ပြပြီးပြီ.
တတိယအဆင့်, မင်း website ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်လို့ရလား. စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းအမြန်တင်ခြင်းအပြင်အဆင်သတ်မှတ်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်, website အပြင်အဆင်, စာလုံးအရွယ်အစား, etc အခြေခံအင်္ဂါရပ်များ.
အခြေခံအားဖြင့်ပုံစံကောင်းတစ်ခုဆုံးဖြတ်ခြင်းတွင်ပါဝင်သည်. ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့်သင်၏ဝဘ်အကြောင်းအရာတင်ပြမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အားလုံး, မှန်ကြည့်တယ်, သပ်ရပ်သည်, ကောင်းတယ်, နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာ.
သင်၏အခြေခံ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုဖွင့်ပြီးနောက်, ဘလော့ပို့စ်ကောင်းများရေးရန်အချိန်ရောက်ပြီ.
သင်၏ပထမဆုံး blog post ကိုရေးပါ. မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးတွေကိုကမ္ဘာကြီးနဲ့ဝေမျှတဲ့နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုလို့ငါထင်တယ်. မင်းကမင်းဘ ၀ မှာရခဲ့တဲ့အရာတွေအကြောင်းမင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကိုဝေမျှနေတဲ့အတွက်ဒီအပိုင်းကိုငါအများအားဖြင့်ကြိုက်တယ်.
လူတို့သည်သူတို့၏ပြဿနာကိုရှာဖွေနေသည့်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေသောဘလော့ဂ်ပို့စ်နှင့်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတများစွာရှိသည်. ဒါအတွက်, ယေဘူယျအားဖြင့်အလိုအလျောက်ပြည့်စုံရန်နှင့် SEO tool အချို့ကို Google ၏အကူအညီကိုငါယူသည်. ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေမှုနှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းစပ်။ အကဲဖြတ်သောအခါလူ ဦး ရေခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ရှာဖွေသည်. ဒီအခြေခံကဒီအထူးပို့စ်ကိုဖတ်မယ့်သူတွေရဲ့ယူဆချက်တစ်ခုနဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးဖို့ငါ့ကိုပိုပြီးလှုံ့ဆော်ပေးတယ်
ဒီနေရာမှာငါမင်းကို pro tip တစ်ခုပေးချင်ပါတယ်. သင်၏ဆောင်းပါးကိုသင့်လျော်သောစာမျက်နှာပေါ်ရှိ SEO နည်းစနစ်များဖြင့်ရေးရမည်. အဆိုပါအကြောင်းပြချက်သည်– ၎င်းသည်သင်၏အကြောင်းအရာအားပိုမိုနီးကပ်စွာနှင့်မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ရန် Google အားကူညီပေးသည်. Google သည်၎င်း၏မိမိကိုယ်ကိုအများကြီးတိုးတက်လာသည်ကိုသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ. ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနည်းပညာအသစ်များနှင့်, သူတို့သည်သင်ရေးသောအကြောင်းအရာများကိုနားလည်နိုင်စွမ်းရှိသည်.
နောက်တစ်ဆင့်သည်ဘလော့ပို့စ်များကိုမြှင့်တင်ခြင်းဖြစ်သည်. အထင်ရှားဆုံးပလက်ဖောင်းများမှာ Facebook ဖြစ်သည်, တွစ်တာ, Instagram တွင်ဤပလက်ဖောင်းအားလုံးသည်သန်းပေါင်းများစွာသောအသွားအလာရှိသည်.
၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်သင်အမှန်တကယ်လိုအပ်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. မင်းရဲ့ blog post ကိုပထမဆုံးစတင်သည့်အခါ, လူတွေကသင်ဘယ်သူလဲဆိုတာနဲ့မင်းရဲ့ blog အကြောင်းဘယ်သူလဲဆိုတာသိဖို့အချိန်အများကြီးယူရသည်. ဒီကိစ္စမှာ, မင်းဘလော့ဂ်ဘာလဲဆိုတာကိုမင်းကိုယ်တိုင် ၀ ယ်ဖတ်နိုင်တယ်? မင်းဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုရေးနေတာလဲ? ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်, တွစ်တာ, ယနေ့ခေတ်တွင် Instagram သည်အရောင်းအ ၀ ယ်ကောင်းတစ်ခုပြုလုပ်ရန်လူကြိုက်များသောနည်းလမ်းများဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးဘလော့ခရီးစတင်ချိန်အတွင်း, ငါအဲဒီတုန်းကဆောင်းပါးရေးတုန်းက, ကျွန်ုပ်၏ blog post ကိုသက်ဆိုင်ရာ Facebook group နှင့်မျှဝေခဲ့သည်. ဒါကငါ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသွားအလာများအောင်ကူညီပေးတယ်.
ဒီအပြင်, Twitter တွင်, hashtags ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုသင်ရယူနိုင်ပါတယ်. Instagram ပေါ်မှာ, website တစ်ခုရဲ့ blog အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ်မြှင့်တင်နိုင်တယ်. သူတို့ကိုသင်တွန်းအားပေးသော Instagram ပို့စ်များအတွက်ဗီဒီယိုတိုများ ပြုလုပ်၍ မင်းရှိရာနေရာကိုရှာဖွေရန်နှင့်သင်၏အကြောင်းအရာများကိုဖတ်နိုင်သလောက်ဆန္ဒကိုပြသရန်တွန်းအားပေးသောအရာများရေးပါ။.
မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ရေးတဲ့အကြောင်းအရာကပရိသတ်ကြားမှာရေပန်းစားလာတဲ့အခါ. သင့်တွင်ငွေရှာရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်. ခေါင်းစဉ်ပေါ်မူတည်, မင်းစာရေးနေတာမင်းစာဖတ်သူတွေကတဆင့်ငွေရှာဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုရွေးရမယ်.
ကဲ, သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ငွေရှာခြင်းနှင့်ပတ်သက်လျှင်. ရိုးသားစွာ, ငွေရှာခြင်းသည်သင်မောင်းနှင်နေသော website အမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်. ဥပမာ, ငါအလှအပလိမ်းဆေးအကြောင်းရေးလျှင်. ငါ့ဘလော့ဂ်မှာ, ဒီကိစ္စမှာ, ကျွန်ုပ်သည်နိုင်ငံတကာပရိသတ်များအတွက် amazon ၏ထုတ်ကုန်အချို့ကိုအကြံပြုရန်အခွင့်အရေးရှိသည်.
သင်ဖော်ပြထားသောထုတ်ကုန်အား ၀ ယ်ယူသောအခါ Amazon Affiliate link, ဤအရာသည်သင့်အားကောင်းမွန်သောကော်မရှင်တစ်ခုပေးပါလိမ့်မည်.
သို့သော်ငြားလည်း, Affiliate ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုသည်အကြောင်းအရာတိုင်းတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်. ဒီနေ့, သင်ကိုယ်တိုင် AdSense ကိုသာကန့်သတ်လို့မရဘူး. mediavine ကဲ့သို့နာမည်ကြီးမီဒီယာကြော်ငြာပလက်ဖောင်းများစွာရှိသည်, Ezoic သည်သင့်အား ၀ င်ငွေရရှိရန်သေချာသည် 1000 + ကြော်ငြာနှင့်ဒေါ်လာသာ.
ငါဒီဆောင်းပါးမှာစောစောစီးစီးငါကြော်ငြာထားတဲ့ပညာရေး ၀ က်ဆိုက်ကိုဖွင့်ထားတဲ့သူငယ်ချင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီးသူကသူ့ဝါသနာကနေဝင်ငွေကောင်းတွေရနေတယ်။.
ယေဘုယျအား, ယနေ့ခေတ်ဘလော့ဂ်တစ်ခုစတင်ခြင်းသည်တကယ်အဖိုးတန်သည်. သင်စိတ်ဝင်စားသောမည်သည့်အရာကိုမဆိုရေးနိုင်သည်. သင်သည်အထူးသဖြင့်နယ်မြေတစ်ခုကိုကန့်သတ်ရန်မလိုပါ. အရေးကြီးတာကမင်းအတွေ့အကြုံကိုပရိသတ်ကိုပြန်ပြောတာနဲ့အပြန်အလှန်ပဲ, မင်းအဲဒီကနေပိုက်ဆံရနေတယ်.
Previous PostDomain နာမည်ဝယ်ပြီးနောက် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တည်ဆောက်ပုံ?